ရှန်ဟိုင်း-ဟားဗတ် စင်တာမှာ အတန်းတက်နေကြောင်း သတင်းပြန့်လွင့်လာတဲ့ EXO's Lay
ရှန်ဟိုင်း-ဟားဗတ် စင်တာမှာ အတန်းတက်နေကြောင်း သတင်းပြန့်လွင့်လာတဲ့ EXO’s Lay
EXO အဖွဲ့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော တရုတ်နိုင်ငံသား Lay ကတော့ သူ့ရဲ့ရပ်တည်မှုအတိုင်း အဖက်ဖက်ကပြီးပြည့်စုံနေအောင် မွမ်းမံနေသူတစ်ဦးပါ။ အနုပညာနယ်ပယ်ထဲမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ရပ်တည်နေသလို စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအပြင် ယခုအခါ ပညာရေးဖက်မှာပါ ပြီးပြည့်စုံအောင် စွမ်းဆောင်နေပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းတွေအရ Lay ဟာ ရှန်ဟိုင်းမှာရှိတဲ့ Harvard Center မှာ အတန်းတက်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နေ့ကတည်းကတိုင် EXO’s Lay Zhang က အဆိုပါ ပညာရေးစင်တာမှာ အတန်းတက်နေကြောင်း မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေပြောပုံအရ Lay ဟာ သင်တန်းတစ်ခုကြိ တစိုက်မတ်မတ် သင်ယူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဟားဗတ်စင်တာအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ “Harvard နဲ့ တရုတ်-အာရှနိုင်ငံတွေကြားက စေ့စပ်ဖလှယ်မှုဖြစ်ပြီး Harvard Business School နဲ့ Harvard China Fund တို့က ဦးစီးပြီး လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဟားဗတ် မဟာပညာရေး၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအပြင်၊ Harvard ကျောင်းများရဲ့ ကျောင်းသားဟောင်းတွေလည်း ပညာဆည်းပူးရင်း စီးပွားရေးနဲ့ အဖွဲ့အစည်းပိုင်းတွေမှာ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှာဖွေရရှိနိုင်ကြောင်း” ဖော်ပြထားပါတယ်။ နယ်ပယ်ကျယ်ပြန့်စွာ လေ့လာလို့ရတဲ့ စင်တာဖြစ်တာကြောင့် Lay တစ်ယောက် ဘယ်နယ်ပယ်ကို လေ့လာသင်ယူနေသလဲဆိုတာတော့ သေချာမသိရှိသေးပါဘူး။ အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်ကြီးကြီးတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်း ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။
Lay ဟာ Chromosome Entertainment ရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်ပြီး ထွက်ထားတာမကြာသေးတဲ့ digital EP “东” (East) ကလည်း စံချိန်မှတ်တမ်းသစ်တွေတင်ရင်း အဖက်ဖက်က အောင်မြင်နေတာပါ။ Lay ကတော့ အနုပညာနယ်ပယ်ကိုပဲ ချဲ့ထွင်ဖို့လား? ဒါမှမဟုတ် ပညာရေးဖက်မှာပါ အောင်မြင်မှုရအောင် စွမ်းဆောင်နေတာလား? ဆိုတာကိုတော့ အချိန်တစ်ခုရောက်ရင် သိရမယ် ထင်ပါတယ်။
Next ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေး ရရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Chen »
Previous « အမိုက်စား အက်ရှင်စွမ်းရည်​တွေနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားထက်​မှာ ပြန်လည်မြင်​တွေ့ရ​တော့မယ့် Hyun Bin